Iinkwenkwezi ezi-4 kwikhaya leholide e-Olderdalen
Olderdalen, Troms og Finnmark fylke, Norway
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDanCenter
Ikhaya leHolide yiLyngenfjord enembono entle yeLyngen Alps enkulu, eyona ndawo isemantla eYurophu. Indawo enkulu amava ebusika kunye nezibane zasemntla. Ilanga lasezinzulwini zobusuku linokubonwa entwasahlobo nasehlotyeni. Indawo esembindini kwindlela enkulu. Umthamo olungileyo webroadband / i-intanethi. Indlu ikumgangatho we-2. kwaye yahlaziywa ngo-2020. Ibonakala imnandi kakhulu i.a. enekhitshi langoku kunye negumbi lokuhlambela. Ukongeza, kukho izindlu zangasese ezi-2. Impompo yokushisa inika ubushushu obuhle kwaye obuzinzileyo. Ngeentsuku ezibandayo zasebusika, isitovu sokhuni sinokusetyenziswa. I-intanethi yasimahla kunye nebroadband enomthamo omkhulu. I-TV yeCable eneziteshi zaseNorway kunye nezamazwe ngamazwe. Ilungu leHammond kwigumbi lokuhlala. Ukusuka kwigumbi lokuhlala, ikhitshi kunye nethafa elijonge kwifjord, kukho iimbono ezintle zeLyngen entle yefjord landscape kunye neLyngen Alps ephezulu enemikhenkce kwiincopho zeentaba kwaye ingumbono onomtsalane. Eyona ncopho iphakamileyo yiJiekkevarre 1833 m.o.h. Ebusika, unokufumana izibane ezisemantla zidansa esibhakabhakeni kuzo zonke izithunzi zombala. Ngentwasahlobo nasehlotyeni unokuhlala kwi-terrace kwaye ujabulele ilanga lasezinzulwini zobusuku kunye nokutshona kwelanga okuhle. Kule ndawo kukho indawo enkulu yokuhamba ecaleni kwefjord nakwiintaba. I-12 km ukuya kwi-ski trail enezibane. Indawo entle yokuqalisa uhambo lokuya nokubuya ngemoto. Iikhilomitha ezingama-35 ukuya eReisadalen National Park kunye nomlambo we-salmon uReisaelva. Ukuloba kungenziwa ecaleni kwefjord ngentonga okanye kumachibi amaninzi okuloba kwindawo. Indlu ibekwe embindini ngaphantsi kwendlela enkulu, kodwa endlwini nakwithafa elijongene nefjord awuboni kancinci kwitrafikhi.
Uyilo: ikhitshi elivulekileyo (15 m2) (i-cooker(umbane), ihood, umatshini wekofu, iayini yewaffle, imicrowave, idishwasher, ifriji, isikhenkcisi (> 250L), isomisi esigutyungelwe, umatshini wokuhlamba), Igumbi lokuhlala/ibhedi (40 m2)( I-TV(intambo, iziteshi zikamabonakude zasenorvegian), isitovu(inkuni), unomathotholo), igumbi lokulala(12 m2)(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokulala(10 m2)(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(8 m2)(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokulala (10 m2)(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(igumbi lokufudumeza eliphantsi)(ibhafu okanye ishawari, isitya sokuhlambela), igumbi lokuhlambela(ukufudumeza umgangatho)(isitya sokuhlambela, indlu yangasese), igumbi lokuhlambela(igumbi lokufudumeza eliphantsi)(isitya sokuhlambela, indlu yangasese), iterrace(62 m2), ifenitshala yegadi, BBQ, umoya ukuya emoyeni heatpump
Le ndlu ifuna idiphozithi ye$166. Iza kutsalwa yodwa yile ndlu ngaphambi kokuba ufike okanye xa ubhalisa xa ufika.